Oge Ọgụgụ: 5 nkeji(Emelitere ikpeazụ On: 13/07/2020)
Milan ka Rome Site Train ma ọ bụ Rome ka Milan bụ ihe dị mfe na oru oma ahụmahụ. Ọ bụghị banyere mara mma! Ị nwere ike na-a ọnụ ala ụgbọ okporo nke nwere ike iwe ogologo oge karịa 3 awa mana ụgbọ oloko si Milan ruo Rome na-enye gị ohere ịpụ elu na mkpa akwụsị inyocha. Ma ọ bụ ịnwere ike ịwụ elu na ụgbọ elu Freccia na-enweghị ọsọ Trenitalia, nke na-ewe nanị 3 awa na 3 nkeji, ọ dịkarịa ala karịa maka njem zuru oke nke ụgbọ elu! Ihe ọ bụla ị kpebiri ntuziaka ngwa ngwa a ga - enyere gị aka ịme mkpebi kacha mma maka onwe gị na njem gị!
Na Milan bụ isi obodo ya, ọ bụ ọ na anya na ndị ọbịa ìgwè ewu na atụrụ na ha ọtụtụ nde mmadụ Lombardy kwa afọ. Ma agafee ejiji mmasị, ọtụtụ ihe ga-eleta ebe n'ime Lombardy n'ógbè Italy na-eti mkpu ka a bịa na.
Anyị kwenyere Emilia Romagna mfe ọkụ nkiri nke ọzọ na-eme ememe Tuscany na Lombardy na-enye temptingly ọnụ nhọrọ maka na-eri si na ulo. ọ bụ na Milan ka Rome Site Train njem kacha mma na-ezo ezo na echiche anyị ma na-Rome ka Milan ụgbọ okporo ígwè! Mapụ n'ọdụ ebe a na-aga ịgagharị!
Erughị a 30 nkeji na-agba ịnyịnya na elu na-agba ụgbọ okporo ígwè si Venice, Padua na-abụkarị elelịkwa si na ọtụtụ ndị ọbịa. ma, ọ na-eme maka oké ụbọchị njem si Venice, àjà a hụperetụ ọgaranya akụkọ ihe mere nke a obodo na otu bụ a dị ike mmekota.
Home ka Italy abụọ mahadum kasị ochie, hiwere na 1222, Padua ka nọgidere na vivacious ikuku nke a mahadum obodo, na na; piazzas na arcaded n'okporo ámá, ọtụtụ cafes na nkpọrọ ebe ubiquitous Spritz bụ de rigueur dị ka ụbọchị ifufe n'ime mgbede. Ahapụkwala!
N'ihi na onye ọ bụla na-eme njem na- Milan to Rome nwere Trenitalia Trains ma ọ bụ n'ụzọ ọzọ gburugburu ụzọ ma ọ dị achọ a miri yikwasịkwara, mgbe unvarnished na n'atụghị egwu authentic njem ahụmahụ.
Anyị na-akwado gị ka isi na Genoa (nke dị ka Venice bụ ozugbo a dị ike Maritime Republic) fronting na Ligurian Sea. Àjà ọzọ ndu na ezigbo ahụmahụ, na-enweta ihe undiluted n'echiche nke akụkọ ihe mere eme, na-enweta citys ọgaranya art idaha na ọwọrọiso ije. One of the top reasons we enjoy it so much is that e nwere oké art na ngosi ihe mgbe ochie na-uncrowded! Ị nwere ike ịchọta ọrụ site Caravaggio, Van Dyck. Rubens, Durer na Veronese na Palazzo Bianco na Palazzo Rosso na ogle ọzọ Old World masterpieces ọtụtụ akara, dị ka Royal Obí na National Gallery of Palazzo Spinola. E nwekwara ezi ihe nlereanya nke ndị Genoa School of art, a ma ama na narị afọ nke 17, na Palazzo Blanco.
Trenitalia elu ọsọ High Speed (OF) ụgbọ oloko na-ahapụ Milan Central Station ugboro ma ọ bụ ugboro abụọ kwa hour maka Rome Termini ọdụ - nkezi 90 ụgbọ oloko kwa ụbọchị. Ndị mbụ Trenitalia ụgbọ okporo ígwè epupụta Milan Central Station na 5:00 a.m. Ụgbọ oloko ikpeazụ Rome doo Milan na 11:18 p.m.
Tiketi ụgbọ elu ụgbọ elu dị elu nwere nnukwu mgbakwunye. Ọpụpụ eletriki dị na oche gị iji kwụọ ụgwọ ngwaọrụ yana WiFi n'ụgbọ okporo ụzọ Frecciarossa na Frecciargento. Otú ọ dị, mgbama ahụ ga-ada mgbe ị nọ n’ime tunnels na na ụgbọ. Nwere ike nwee nnukwu cafe Italiantali n'ụgbọ nri na ụgbọ oloko ọ bụla. Nakwa dị ka a na nri ibu na-eweta snacks, sandwiches, na-aba n'anya na gị oche. Ná ngwụsị nke ọ bụla ụgbọ ala, ị ga-ahụ a mposi na ọtụtụ racks ka ụlọ ahịa nnukwu ibu.
Ị chọrọ Embed anyị blog post “Milan Ga Rome Na Trenitalia Trains” na na gị na saịtị? Ị nwere ike ma na-ewe anyị foto na ederede na-enye anyị n'aka na a njikọ a blog post. Ma ọ bụ pịa ebe a: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/milan-rome-train/ – (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)